$22.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $27.99
အရောင်ကိုင်တွယ် အနီရောငျ အဖြူ Black က
တရုတ် / နီ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အဖြူရောင် တရုတ် / Black က ယူနိုက်တက်စတိတ် / အနီ တရုတ် / အဖြူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / လူမည်း
Electric Makeup Brush Cleaner - China / Red backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမည်: လျှပ်စစ်မိတ်ကပ် Brush လျှော် Cleaner
brush ပစ္စည်း: ကြွက် ဒြပ်ဆံပင်, ရေမြှုပ်, ပလပ်စတစ်, ဆီလီကွန် Mink ဆံပင်
အရေအတွက်: မိတ်ကပ် Brush Cleaner စက်
၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေး၏လက်ကိုင်တွင် AAA ဘက်ထရီ ၂ ခုပါရှိသည်။ ဘက်ထရီများမပါဝင်ပါ။
သူသည်စုံလင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Gracias!
Wauw ဒီထူးခြားတဲ့စတိုးဆိုင် !! အကြှနျုပျ၏ပစ္စည်းကိုပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေ, 10days ရှေ့ဆက်အချိန်ဇယားကိုအပ်ခဲ့သည်။ ငါစမ်းကြည့်လို့မရသေးဘူးဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုဒီနေ့နောက်မှစမ်းပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတိုးဆိုင်နှင့်အတူဒါဝမ်းသာတယ်!
တစ် ဦး descrição be enquanto está funcionando